रुसी सेनाले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की माथि आक्रमण गर्यो, के छ अवस्था ? थप विवरण सहित — Imandarmedia.com
रुसी सेनाले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की माथि आक्रमण गर्यो, के छ अवस्था ? थप विवरण सहित
काठमाडौं। रुसी सेनाले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की माथि तेस्रो पटक आक्रमण गरेको छ। मध्यरातमा रुसी सेनाले प्यारासुटबाट अनुठो तरिकाले आक्रमण गरेका हुन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की तेस्रो चोटी पनि बालबाल बचेका छन्।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको तेस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ। रुस सामु यतिलामो समयसम्म युक्रेन टिक्छ भन्ने कसैले सोचेकै थिएनन्। यद्यपी पश्चिमा राष्ट्रबाट अत्याधुनिक हतियार पाएपछि युक्रेनलाई फाइदा पुगिरहेको छ।
अमेरिकका अनुसार रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा १५ हजारभन्दा बढी रुसी सेना मारिएका छन्। यस क्रममा युक्रेनको भने कम्तिमा ७ हजार सेनाको ज्यान गएको नेटोको भनाइ छ।
त्यसबेला नै रुसका विशेष फौज युक्रेनको राष्ट्रपति निवासमा राति प्याराग्लाइड गर्दै पुगेका थिए। जेलेन्स्कीका अनुसार पुटिनले उनीहरुलाई जिउँदै पक्रिन अथवा आफ्नो हत्या गर्न नै आदेश दिएका थिए।जेलेन्स्की आफ्ना श्रीमती र दुई छोराछोरीसँग निवासमै थिए।